Booliska Jarmalka oo xiray sarkaal al-Shabaab ah - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeWorldBooliska Jarmalka oo xiray sarkaal al-Shabaab ah
July 6, 2016 Abdi Omar Bile World 0
Booliska Jarmalka ayaa xiray 28-sanno jir jarmal ah oo looga shaki qabo inuu kamidyahay maleeshiyada al-Shabaab oo diyaarinayay ficilo rabsho leh, sida uu sheegay xeer ilaaliyaha Jarmalka.
Ninka ay booliska xireen ayaa lagu magacaabaa Abshir Axmed kaasoo lagu qabtay garoonka diyaaradaha magaalada Frankfurt markii uu kusoo noqday Jarmalka isagoo kasoo noqday Soomaaliya, sida lagu sheegay bayaan kasoo baxay xafiiska xeer ilaaliyaha.
Xafiiska xeer ilaaliyaha ayaa sheegay in cadaymaha hor u dhaca ah ay muujinayaan in ninkaas uu ku biiray kooxda al-Shabaab sanadkii 2012-ka.
28-sanno jirkan ayaa tababar ku saabsan sida hubka loo isticmaalo kusoo qaatay gudaha Soomaaliya, sida uu sheegay xafiiska xeer ilaaliyaha.
October 2, 2016 Tobonaan qof oo ku dhintay banaanbaxyo ka dhacay gobolka Oromada ee Itoobiya
July 6, 2016 Suspected Al-Shabaab Member Arrested in Germany
June 21, 2016 Aqalka sare ee baarlamaanka Maraykanka oo diiday xoojinta xakamaynta hubka